Grace Mugabe oo codsaneysa xasaanad diblomaasiyadeed - BBC News Somali
Image caption Grace Mugabe waa xaaska labaad ee madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe
Grace Mugabe ayaa weli ku sugan Koofur Afrika, sida ay wasaaraddu sheegtay, warkan oo khilaafsan wararkii hore ee sheegayay inay dib ugu laabatay Zimbabwe.
Haweeney 20 sano jir ah oo u dhalatay dalka Koofur Afrika ayaa ku eedeysay Grace Mugabe inay tacaddi ugu geysatay hotel ku yaalla magaalada Johannesburg Axaddii.
Booliiska ayaa filayay in Grace oo 52 sano jir ah, inay booliiska hortimaaddo Talaadadii, balse ma aysan sameyn.
Dowladda Zimbabwe ayaa u dalabtay Grace xasaanad diblomaasiyadeed, sida ay wasaaraddu sheegtay.
Si kastaba, Koofur Afrika ayaa weli dooneysa inay hubiso in Grace la soo marsiiyo hannaanka sharciga ah, sida ay wasaaraddu xustay.
Dowladda Koofur Afrika ayaa khatar ugu jirtay inay cambaareyn la kulanto haddii ay Grace Mugabe fasaxdo.
Tan ayaa dhacday sanadkii 2015-kii, markii ay dowladda Koofur Afrika ku guul-darreysatay inay qabato madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Al-bashiir oo ay dooneysay Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah.
Dowladda Koofur Afrika ayaa ku doodday in madaxweyne Al-bashiir uu u qalmay xasaanad diblomaasiyadeed, balse xaakimiinta dalkaasi ayaa ku gacan seyray. Dowladda ayaa kaddib si xooggan loogu cambaareeyay inay jebisay qeynuunka.
Waxay u muuqataa in dowladdu ay dooneyso inay ka fogaato in cambaareyn kale ay la kulanto, sidaas darteed waxay ku adkeysaneysaa in Grace Mugabe ay qasab tahay inay maxkamdd ka soo muuqato.
Balse inay tallaabadaasi qaaddo, waxay khatar gelineysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dowladda Zimbabwe - oo ay xulafo yihiin, isla markaana ay si aad ah u difaaceysay muddo sanado ah iyadoo ay jirto cambaareyn caalami ah oo ka dhan ah taariikhda xuquuqda aadanaha ee madaxweyne Robert Mugabe.
Sidaa daraaddeed labada dowladood waxaa looga fadhiyaa inay wada hadal yeeshaan si ay u xalliyaan kiiska Grace.
Haweeneyda u dhalatay Koofur Afrika, Gabriella Engels, ayaa ku eedeysay Grace Mugabe inay madaxa uga garaacday qaybisada korontada.
Lahaanshaha sawirka GABRIELLA ENGELS
Image caption Gabriella Engels waxay sheegeysaa in lagu garaacay qaybisada kororntada
Arrintan ayaa dhacday kaddib markii ay Grace aragtay haweeneydaas oo labadeeda wiil, Robert iyo Chatunga, la fadhisa qolka hotel ku yaalla magaalada Johannesburg, fiidnimadii Aaxaddii.
Wiilasha Grace Mugabe, oo labadooduba da`da 20-naadka ku jira, ayaa waxay ku nool yihiin Koofur Afrika.